The Irrawaddy - Burmese Edition's posts - Fdata
အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရသော မြိုတိုင်းရင်သား ၈ ဦးထဲတွင် ပထမ အလောင်း ၆လောင်း တွေ့ပြီး နောက်တနေ့ တွင် ပျောက် ဆုံး နေသော အမျိုးသမီး၂ဦးထဲမှ ၁ ဦး၏ အလောင်းကို စမ်းချောင်းထဲတွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကျန် အမျိုးသမီး ၁ ဦးမှာ ယနေ့အချိန်ထိ ပြန်မတွေ့သေးကြောင်း ကျေးရွာသားများက ပြောသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - [ Goo.gl Link ]
မေယုဒေသ ထာဝရ လုံခြုံရေး ရှိလာနိုင်မလား
629 likes - 13 comments
အစိုးရဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင် ခွင့်မပိုင်ဘူး၊ မင်းပိုင် စိုးပိုင်သာ ဖြစ်တယ် လို့ သိလာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအတွက် မေးလည်း မမေးရဲသလို၊ သိလည်း မသိကြတော့ပါဘူး။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ သတင်း အချက်လက် တန်ဖိုးသိတဲ့ သူတွေက ပေါ်လစီမိတ်ကာ (မူဝါဒရေးဆွဲသူ/ မူဝါဒချမှတ်သူ) တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး စီးပွားရေးကို လက်ဝါးကြီး အုပ်တဲ့ အလေ့အထတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တိုမှာ သိနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့မှာ သိပိုင်ခွင့် ရှိတယ်
291 likes -0comments
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ထေရဝါဒက အားအနည်းဆုံး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတလွှားတွင် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိသည့် မဟာယန တိဘက် ဗုဒ္ဓဘာသာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မြန်မာနှင့် လာအို အနီးမှ နယ်စပ်ဒေသများတွင်သာ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ရောက်ရှိလာသည့် အချိန်တွင် ထေရဝါဒက ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - [ Goo.gl Link ]
တရုတ်ထေရဝါဒ၏ ဩဇာ အကန့်အသတ်
2262 likes - 41 comments
ကျနော်တို့ဟာ ဆရာငြိမ်းရဲ့ သီချင်းများကို ပြန်လည် လေ့လာ ကြတဲ့အခါ သမိုင်းအတွက် တန်ဖိုးလည်း ရှိ၊ သီချင်းရေး ဆရာအဖို့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ရှိ၊ မွန်မြတ်မှုလည်း ရှိစေတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို တွေ့ရပါ တယ်။ ဒီသီချင်းဟာ အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့ရဲ့ လက်နက် အားကိုးနဲ့ မတရားဖိနှိပ်တဲ့ ခေတ်ကြီးကနေ နယ်ချဲ့ကို သူ့ကျွန်မခံ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ဖိရင်ကြွ၊ ထိရင်ချ ခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတရပ်ကို ဆရာငြိမ်းဟာ သူ တတ်ကျွမ်းတဲ့... View more »
မြို့မငြိမ်းရဲ့ ဘုရားဈေး ပြေးလို့ မြင်နိုင်သည်
ကလေးတယောက်ကို စည်းကမ်း ပေးတယ်ဆိုတာဟာ လူ့လောကရဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်တတ်စေ ဖို့၊ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်း ဥပဒေ၊ စောင့်ထိန်းရမယ့် ကျင့်ဝတ်၊ ဝတ္တရား စတာတွေကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းတတ်စေဖို့ အတွက် မိဘများက သင်ကြားပေးခြင်းကို စည်းကမ်းပေးတယ်လို့ ဆိုတာပါပဲ။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - [ Goo.gl Link ]
အိမ်တွင်း အာဏာ၊ စည်းကမ်းနဲ့ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်
1013 likes -5comments
Thein Myint yesterday at 20:56
.....Mi-Ba-tway.....Ko-Tai-ka.....Mi-Ba-phyit-Thin-Tann.....Ma-tet-khaet....kya-ya-loet......Apyit-pyaw-chinn.....Thee-khan-kya-par.....Byar !....Ahi !
အိမ်ရှင် မလေးရှားအသင်းကို အကျိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ မြန်မာအသင်းကိုအား ပေးနေကြသော မြန်မာပရိတ်သတ်
၂၁၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၇
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော ၂၉ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကို သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အိမ်ရှင် မလေးရှားဘောလုံးအသင်းနှင့် မြန်မာဘောလုံး အသင်းတို့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့ ၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်ပြသလျက် ရှိပြီး... View more »
Photos from The Irrawaddy - Burmese Edition's post
19514 likes - 634 comments
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုမိုပါဝင်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ (ရုပ်/သံ)
ဧရာဝတီ ၊ သြဂုတ် ၂၁ ၊ ၂၀၁၇
ရိုက်ကူး/ တည်းဖြတ်- အဲမလီ
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးသည် အလုံဈေးသို့ လာရောက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ဈေးသူဈေးသားတချို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မူလနေရာ၊ အကျယ်အဝန်း မူလဆိုင်ခန်းအတိုင်း ပြန်ပေးမည်ဟု နှုတ်ကတိပေး ခဲ့ကြောင်း၊ ဈေးသူဈေးသားများက အယုံအကြည်မရှိသောကြောင့် သဘောတူညီချက်များကို စာချုပ်စာတမ်းဖြင့် တရားဝင် ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ငြင်းပယ်ခဲ့သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း... View more »
ရန်ကုန် အလုံဈေးသစ် စီမံကိန်း သဘောတူညီချက်များ တရားဝင် ကြေညာပေးရေး ဆန္ဒပြ
1561 likes - 20 comments
yesterday at 12:06. Facebook
အဓိက ကတော့ စစ်ကြောင်းတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ တပ်မတော်၊ စကခမှူးက ပြောတယ်။ စစ်ကြောင်း မရှိတော့ရင် ပြဿနာက မရှိတော့ဘူးလေ။ တဖက် KIA ဘက်ကလည်း ရွာမှာမရှိတော့ဘူး။ တောင်ထိပ်ဘက် ရောက်သွားပြီ ပြောတော့ ပြန်မယ့် ဒေသခံတွေ လုံခြုံရေးက စိတ်ပူစရာ မလိုတဲ့ အခြေ အနေတော့ ရှိပါတယ်
2200 likes - 30 comments
yesterday at 11:44. Facebook
သတိပေးတာက နည်းနည်း သတိပေးတာ မဟုတ်ဘူး၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို သတိပေးထားတာ၊ စိတ်ဆိုးလို့ ကျနော် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးကိုလည်း ဖုန်းဆက်ပြီးပြီ။ AK မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ပြန်အပ်ပါ၊ လုပ်မယ် ဆိုရင်လည်း ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပါ။ ဇီးယို သုံးပြီး လမ်းဖာတာ ရှက်လွန်းလို့ ကျနော်တို့ လမ်းဖာတဲ့ စက်လည်း မှာထားပါတယ်
လမ်းပျက်စီးမှု များသည့် AK ကုမ္ပဏီ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးခံရ
12528 likes - 260 comments
ဦးဝင်းထိန်သည် ယခင်က NLD ပါတီ၏ ပြောခွင့်ရှိသူ တဦးဖြစ်ပြီး သမ္မတ ဦးထင်ကျော် နုတ်ထွက်မည် ဆိုသည့် ကောလာ ဟလများ လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ပျံ့နှံသည့်ကိစ္စတွင် “ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကပဲ ဖြန့်လား။ တပ်မတော်ကပဲဖြန့်လား။ ကျနော်တို့ကို မုန်းတဲ့ အိုင်တီသမားတွေကပဲဖြန့်လားမသိဘူး”ဟု မဆင်မခြင် စကားကျွံမှုများ ကြောင့် တပ်မတော်၏ အပြင်းအထန် ရှုတ်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
NLD ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့တွင် ဦးဝင်းထိန် မပါတော့
5846 likes - 257 comments
yesterday at 11:29. Facebook
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်များအတွင်း အကြမ်းဖက် သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မွတ်စလင် များ သေဆုံးမှု များမှာ ပိုမိုများပြား လာလျက်ရှိပြီး သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့အထိ သေဆုံးသူ ၅၉ ဦးနှင့် ပျောက်ဆုံးသူ ၃၃ ဦး ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရခိုင် အရေးကို နိုင်ငံရေး အမြတ်မထုတ်ရန် NLD အမတ်ပြော
3431 likes - 143 comments
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လသည် UNFC ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ၎င်းက ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ကျင်းပသည့် ပန်ဆန်း ထိပ်သီးညီလာခံသို့ တက်ရောက်ကာ ညီလာခံ အပြီးတွင် UNFC မှ နုတ်ထွက်ကြောင်း၊ အစိုးရ နှင့် ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်သည့် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု စာချုပ် (NCA) ကိုလည်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
KIO ဒုဥက္ကဋ္ဌအား FPNCC နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရေး ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ၂ အဖြစ် ခန့်အပ်
ကျေးရွာမီးလင်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမှု ပုံစံဟာ ကျေးရွာ ပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဖွဲ့စည်းတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ထူထောင်လိုပါက ဒီမိုက ရေစီ ကျင့်စဉ်များကို အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်တို့က အားပေးကူညီဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ဒီကော်မတီတွေကို အစိုးရအာဏာနဲ့ ဖျက်သိမ်း ဖို့ဆိုတာက ဒီမိုကရေစီ အစိုးရအတွက် သင့်လျော်မှု ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - [... View more »
ကျေးရွာ မီးလင်းရေး ကော်မတီများ ဖျက်သိမ်းရေးအဆို မအောင်မြင်
916 likes - 20 comments
Myint Hlaing yesterday at 12:49
အလုံဈေးသူ ၊ဈေးသားများ စည်ပင်ကို ဒုတိယအကြိမ်ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
1095 likes - 41 comments
ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား ခေတ်ရေစီးနဲ့ ကိုက်ညီပြီးအမှန်တကယ်လည်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Selfie stick နဲ့ Power bank ပါ။ ခရီးမသွားဘဲ အိမ်မှာနေရင်းတောင် ဖုန်းတလုံးနဲ့ Selfie ရိုက်ပြီးအလုပ်များနေကြတဲ့ ဒီခေတ်မှာ Selfie stick ကလည်းလိုအပ်တဲ့ Accessories တခုပါပဲ။
“ကိုယ့်ပြုတဲ့ ကံ ကိုယ်ပြန်ခံရမယ်” ဆိုတဲ့ လောကသဘာဝ နိယာမကို မီးမောင်းထိုးထားတဲ့ “ပွဲခံမယ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာ ခံရမယ်၊ ကိုယ်ပြုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ပြန်ခံရမယ် ဆိုတာကို ပညာပေးရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးလက်သဘာဝ ဒရာမာ၊ အက်ရှင်ကား “ပွဲခံမယ်”
1292 likes -6comments
yesterday at 10:24. Facebook
သြဂုတ် ၂၀ ရက်က ၈၈ အဖွဲ့ ဝိုင်းမော်၊ ဆဒုံး အခြေစိုက် စစ်ဗျူဟာ လက်အောက်ရှိ ဝါးရှောင် စစ်ဆေး ရေး ဂိတ် အရောက် ၌ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက် မပါရှိ၍ ဆန်အိတ် ၁၀၀ တင်ထားသော ကား တားမြစ် ခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု
လီဆူ စစ်ရှောင်စခန်းသို့ လှူဒါန်းရန်သွားသည့် ၈၈ အဖွဲ့ ဆန်ကား တားမြစ်ခံရ
1326 likes - 54 comments
yesterday at 10:09. Facebook
အာဆီယံ နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ တေးသံရှင် နီနီခင်ဇော်နဲ့ အောင်ထက်တို့က သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ နီနီခင်ဇော်က Semi Final ပွဲစဉ်မှာ “နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခြင်း” တေးသီချင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ Final ပွဲစဉ်တွင် “မျှော်လင့်ချက်တစုံတရာ” တေးသီချင်းဖြင့်လည်းကောင်း သီဆိုခဲ့ကာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွင် အဆိုတော် နီနီခင်ဇော် ဒုတိယဆု ရရှိ
9293 likes - 59 comments
yesterday at 09:38. Facebook
Stephen နဲ့ အဖွဲ့က အခု လေ့လာချက်မှာ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အစားစုံ စားသုံးနေတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ချွေး ခံအားကစားဝတ်စုံတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်စေတယ်။ ပြီးတော့မှ အဆိုပါ ဝတ်စုံ တွေကို ရယူပြီး အမျိုး သ မီးတွေကို အနံ့ခံကာ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါစစ်တမ်း အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသားစား သုံးမှု နည်းသူ၊ အသီးအနှံစားသုံးမှုများတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ချွေးနံ့ကို ပိုမို သဘောကျ... View more »
သက်သတ်လွတ်သမားတွေကို အမျိုးသမီးများ ပို စိတ်ဝင်စား